किन घट्यो सुनको आयात? :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
किन घट्यो सुनको आयात?
गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष सुनको आयात ह्वात्तै घटेको छ। नेपाल बैंकर्स संघकाअनुसार गत आर्थिक वर्षको माघ १७ सम्मको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षमा २ हजार ९ सय किलो कम सुन आयात भएको छ।
गत वर्ष माघ १७ सम्म ४ हजार ३ सय ५० किलो सुन आयात भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने जम्मा १ हजार ४ सय ५० किलो सुन आयत भएको छ। यो गत वर्षको तुलनामा एक तिहाइ मात्रै हो।
पछिल्ला वर्षमा सुनको आयत बढिरहेको भएपनि यो वर्ष भने घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालमा औपचारिक क्षेत्रबाट ७ हजार ३ सय १० किलो सुनको आयात भयो।त्यसपछिको वर्षमा २०७५/७६ मा भने नेपाली बैंकले ७ हजार ४ सय ५० किलो सुन भित्रिएको थियो।
त्यसो त यो वर्ष सुनले अहिलेसम्मकै सबैभन्दन उच्च मूल्य बनाएर किर्तिमान पनि कायम गर्याे। त्यसैले सुनको आयात कम भएको जानकारहरु बताउँछन्।
सुनचाँदी व्यावसायी महासंघका महासचिव धर्मसुन्दर बज्राचार्यले भने, ‘अघिल्ला वर्ष माघ/फागुनमा दैनिक ४० देखि ५० किलो सुनको माग हुन्थ्यो, मूल्य बढेकै कारण अहिले ५ देखि १० किलो मात्रै छ।’ उनी अहिले सुनको व्यापार निकै घटेको बताउँछन्।
मुल्य बढेसँगै सुन बेच्न चाहानेको संख्या पनि बढेकाले सुनको आयात कम भएको उनको दाबी छ।
‘घरमा राखिएको सुन बजारमा आएकाले ढिक्का सुनको आयात कम भयो,’ उनले भने।
बैंकर्स संघका सिइओ अनिल शर्माले पनि मूल्य बढेकै कारण माग घटेकाले बैंकहरुले सुनको आयात कम गरेको दाबी गरे।
महासचिव बज्राचार्य अनौपचारिक क्षेत्रबाट सुन आयात भएकाले बैंकले दिने सुनको माग कम भएको कुरा अस्वीकार गर्छन्।
उनको तर्क छ, ‘महासंघले सबै सुनको व्यापार गर्ने साथीहरुलाई ढिक्का सुन बैंकबाट मात्रै लिने र गहनाको किन्दा बिल अनिवार्य लिएर मात्रै कारोबार गर्ने भनेका छौं। त्यसैले अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको सुन कारोबार भएको छैन। बजारमा सुनको माग नै कम भएको हो।’
एक वर्षमा १७ हजारले बढ्यो सुनको भाउ
पुस २३ गते अहिलेसम्मकै उच्च करोबार
अहिले प्रति १० ग्राम सुन आयात गर्दा भन्सार दरको रुपमा ६ हजार सरकारलाई बुझाउनु पर्छ। त्यस्तै बैंकले सुन आयात गर्दाको लागत र आफ्नो नाफाको रुपमा छुट्टै ०.५ प्रतिशत मूल्य थप गर्छ। त्यसमा व्यावसायीले आफ्नो नाफाको रुपमा ०.५ प्रतिशत पनि छुट्याएका हुन्छन्।
नेपालमा मात्रै नभएर भारतमा पनि सुनको आयात घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यामका अनुसार सन् २०१९ को अप्रिलदेखि डिसेम्बरसम्म सुनको आयात ६.७७ प्रतिशतले कमी आएको हो।
भारतमा वार्षिक ८ देखि ९ सय टन सुनको आयात हुने गरेको बताइन्छ। सुनको बढ्दो आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै गत वर्ष भन्सार दर बढाएर १० बाट १२.५ प्रतिशत पुर्याइएको थियो।
कस्तो छ नेपालमा सुनको आयातको इतिहास?
२०६२ सालदेखि भने सुन व्यवसायीहरुले नेपालमा आफूले गरेको सुनको व्यावसाय देखाएर सुनको आयात गर्न पाइने व्यावस्था गरियो। त्यतिबेला सुन कारोबार गर्ने व्यापारी ओपन जनरल लाइसन्स (ओजीएल) लिएर विदेशमा एलसी खोलेर सुनको कारोबार गर्न सक्थे। यो सँगै नेपाल सुनको कारोबारले कानुनी मान्यता पायो।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, माघ २४, २०७६, ०७:१५:००